Al-shabaab oo meel fagaare ah ku dilay nin ay sheegeen inuu u basaasayay sirdoonka Mareykanka iyo Rwanda – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Al-shabaab oo meel fagaare ah ku dilay nin ay sheegeen inuu u basaasayay sirdoonka Mareykanka iyo Rwanda
Wararka ka imaanaya magaalada Jilib ee gobolka J/dhexe ayaa sheegaya in Xarakada Al-shabaab ay meel fagaare ah ku dileen nin kasoo jeeda dalka Tanzania islamarkaana ay ku eedeeyeen inuu u basaasayay dowladaha Rwanda iyo Mareykanka.
Ninkaan la dilay oo magaciisa lagu sheegay Ciise James ayay Shabaabku sheegeen inuu qirtay inuu la shaqeeynayay sirdoonada Mareykanka iyo Rwanda islamarkaana uu arrinkaasi ku qaatay lacag dhan $4,000, si uu u basaaso xubnaha sarsare ee ka tirsan Al-shabaab.
Fagaaraha ninkaan lagu dilay oo ku yaalo degmada Jilib ayaa waxaa usoo daawasho tagay dadweyne fara badan oo ay Al-shabaab isugu yeertay, waxaana la sheegayaa in ninkaasi la dilay uu ka tirsanaa Al-shabaab.
Ma jirto warar madax banaan oo xaqiijinaya in ninkaan uu ahaa nin la shaqeeynayay sirdoonada dowladaha Mareykanka iyo Rwanda, marka laga reebo eedeymaha Al-shabaab u jeediyeen ninkaas.
Al-shabaab ayaa inta badan Al-shabaab dilal u geysataa ajaanibta ka bar-bar dagaalamaysa hadii ay uga shakiyaan falal basaasnimo.